Kooxo hubaysan oo weeraray Jaamacadda Magaaladda Mombasa iyo araday dhaawacantay. – Balcad.com Teyteyleey
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in Kooxo hubeeysan weerar ku qaadeen Jaamaamacadda Magaaladda Mombasa, Waxaana halkaasi ku dhaawacmay Dhowr ka mid ah Ardaydii Jacadda dhiganeysay.
Wakaaladaha wararka ayaa sheegay in la weeraray Jaamacadda Farsamadda ee Magaladda Mombasa, waxayna sheegeen inay Arday badan joogeen markii uu Weerarku dhacayay.
Mid ka mid ah dadka Shacabka ah u sheegay Reuters in isaga iyo Arday kale ay carareen markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen, islamarkaana ay arkeen Arday korkooda dhiig ku yaalo oo dhismaha Jaamacadda laga soo saarayo iyo Booliiska oo Jaamacadda soo galaya.
Booliiska Kenya ayaa sheegay in la dilay labo kamid ah Shaqaalaha Jaamacadda Dhowr Ardayna la dhaawacay markii rag hubeysan ay Weerar ku qaadeen Gaari arday siday oo sii galayay Xarunta Jaamacadda Farsamadda ee Mombasa.
“Laba haween ah ayaa la dilay oo ka tirsanaa Shaqaalaha Jaamacadda, Darawalkii iyo Sarkaal Booliis ahna la dhaawacay” ayuu yiri Sarkaal Booliis oo Reuters la hadlay diidayna in magaciisa la shaaciyo.
Sargaalka u waramay Wakaalada wararka Reuters ayaa sheegay in raga Weeraray jaamacadda ay tiro ahaan Gaarayaan 10 Ruux ayna si aad ah u hubaysnaayen.
2-dii April Sanadkii 2015-kii ayey ahayd markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay Weerar ku qadeen Jaamacaddii Magaladda Garissa oo ay ku dileen 148 Ruux oo u badan Ardaydii Jaamacadda, islamarkaana ay ku dhaawaceen in kabadan 79 kale.
The post Kooxo hubaysan oo weeraray Jaamacadda Magaaladda Mombasa iyo araday dhaawacantay. appeared first on Ilwareed Online.